Nagarik News - 'सामाजिक जीवनमा योगदान गर्न चाहन्छु'
सत्कार मेसिनरी कन्सर्नबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गरेका भोला दुलाल व्यवसायसँगै समाज सेवामा सक्रिय छन् । पूर्वाञ्चल लुब्रिकेन्ट आयल (पीएलओ)का अध्यक्ष रहेका दुलाल २२ व्यापारिक र सामाजिक संस्थामा आबद्ध छन् । नेपाल जेसिजको अध्यक्ष भइसकेका दुलालको व्यावसायिक र सामाजिक जीवनबारे शुक्रवारका लागि दिलीप पौडेलले गरेको कुराकानीः
अहिलेसम्म कहाँ—कहाँ घुम्नुभयो ?
नेपालका ७५ वटै जिल्ला र विश्वका ७६ देश ।
विदेश भ्रमणबाट के सिक्नुभयो ?
विश्वका अमेरिकन, युरोपियनलगायत ७६ मुलुक घुम्दा सरकार र निजी क्षेत्रको दृढ इच्छाशक्ति भएका देशमा विकास भएको छ । सबै काम गर्ने भावनामा जाग्नुपर्ने रैछ । सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
विदेशको राम्रो पक्ष के लाग्यो ?
विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा छ । कर तिरेको आधारमा सुविधा दिँदा रहेछन् । कर तिरेको मापदण्ड बनाएर राज्यले ६० वर्ष नाघेपछि सुविधा दिने व्यवस्थाका कारण सबै व्यवसायी कर तिर्न उत्प्रेरित हुँदा रहेनछन् । युवा उमेरमा काम गरेर, कमाएर, तिरेको करकै आधारमा राज्यले सुविधा दिए राम्रो हुन्थ्यो ।
आफूलाई कसरी चिनाउनुहुन्छ ?
म एउटा व्यवसायीसँगै सामाजिक अभियन्ता पनि हो । सकारात्मक सोच लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । सामाजिक प्राणी भएकाले सामाजिक जीवनमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने दृढ संकल्पसाथ काम गर्नुपर्छ ।
समाज सेवामा कति खर्च गर्नुहुन्छ र के काम गर्नु भएको छ ?
आम्दानीको २५ प्रतिशत हिसाब गरेरै खर्च गर्छु । मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ यो क्षेत्रमा जान्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाका लागि, कुलतमा फसेका युवायुवतीका लागि सचेतना अभियान, अपांग र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यमा सहयोग हुन्छ ।
आफ्ना उत्तराधिकारीलाई कुन पेशामा लगाउन चाहनुहुन्छ ?
मेरो छोरा र छोरीलाई व्यवस्थापन संकाय पढाएको छु । आफ्नो क्षमता र रुचिअनुसार एमबीएस सकाएपछि काम गर्लान् । छोराल मेरो पेशालाई नै निरन्तरता दिने लक्षण देखाएको छ भने छोरीले पनि मेरै व्यवसाय गर्छु भन्छिन् ।
कुन सवारी साधन प्रयोग गर्नुहुन्छ?
टोयटाको प्राडो ल्यान्डक्रूजर ।
महिनामा कति पटक सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ ?
पाँच हजार किलोमिटर गुड्नासाथ सर्भिसिङ गर्छु । सर्भिसिङमा पीएलओ लुब्रिकेन्ट आयलनै प्रयोग गर्छु ।
पीएलओ लुब्रिकेन्टस्का विशेषता के छन् ?
यसमा क्वालिटी भएकाले कन्फिडेन्सका साथ सबैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
कतिजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ ?
म आबद्ध उद्योग र सोरुमहरूमा करिब छ हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
विश्व बजारमा हेर्दा स्वस्थ छ । नेपालमा चाहिँ अस्वस्थ ।
जीवनको उत्तरार्ध कसरी बिताउने योजना छ ?
६० वर्षपछि व्यवसायिक र सक्रिय जीवन त्यागेर बाँचुञ्जेल समाज सेवामा सक्रिय हुन्छु ।
समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
बिहान दुई घण्टा जति योगा र ब्याडमिन्टन खेलमा बित्छ । व्यावसायिक काममा आठ घण्टा, सामाजिक काम र साथीभाइको काममा तीन घण्टा, परिवार, व्यक्तिगत काममा तीन घण्टा र आराममा आठ घण्टा ।
सभापति कोइरालाको उपलब्धिविहीन कार्यकाल
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको असहयोगका कारण पार्टी र सरकार राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको कुतर्क गरेका छन्। सभापति कोइरालाको चारवर्षे...
प्रविधिले मानव जीवनलाई सुविधासम्पन्न र सहज बनाएको छ। तर, केही जटिलता पनि उत्पन्न भएका छन्। प्रविधिका तरंगहरु फैलिरहँदा सम्बन्धका तारहरु चुँडिरहेका पनि छन्। भौतिक दूरी त घटेको छ तर मनको...
भारतको एक दैनिक पत्रिका 'टाइम्स अफ इन्डिया'ले केही वर्षअघि आफ्नो मुम्बई संस्करणका लागि केही पत्रकारको विज्ञापन गर्योक। पाँचजनाका लागि गरिएको सो विज्ञापनमा कैयौँ युवायुवतीले दर्खास्त दिए र लिखित र अन्तर्वार्ताबाट...